Nalsalcrom Nasal Spray : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Nalsalcrom Nasal Spray
Nalsalcrom Nasal Spray ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
NasalCrom Nasal Spray ကို နှာခေါင်းတွင်းဓါတ်မတည့်တုန့်ပြန်မှုလက္ခဏာတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရာမှာအဓိကအသုံးပြုပါတယ်။ Hay fever ကဲ့သို့ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တဲ့ ဓါတ်မတည့်ရောဂါတွေနဲ့ ဖုန်မှုန့်၊ တိရစ္ဆာန်အရေပြားဆဲလ်သေစတဲ့ အခြားအရာဝတ္ထုတွေ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နှာစေးခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ လည်ချောင်းထဲသလိပ်ပြန်ကျခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ နှာချေခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုသက်သာစေပါတယ်။
Nalsalcrom Nasal Spray ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးမထည့်ခင် နှာခေါင်းထဲပိတ်ဆို့နေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကိုညှစ်ထုတ်ဖယ်ရှားပါ
ဆေးမထည့်မယ့် နှာဝတစ်ဖက်ကို လက်နဲ့ပိတ်ပါ
NasalCromဆေးရည်ကို နှာခေါင်းပေါက်ထဲ ဖြန်းပေးပါ။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ နှာခေါင်းကနေအသက်ရှူသွင်းပါ
နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းအထိဆေးရည်ရောက်ရှိအောင် နောက်ထပ်အကြိမ်အနည်းငယ် ခပ်ပြင်းပြင်းရှူသွင်းပါ
ဆေးဖြန်းပြီးတိုင်း ဆေးပုလင်းအဝကို ရေနွေးနဲ့ဆေးပြီးသန့်ရှင်းတဲ့တစ်ရှူးစနဲ့ သုတ်ပေးပါ
Nalsalcrom Nasal Spray ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
NasalCrom Nasal Spray ကိုအခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ NasalCrom Nasal Sprayကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။NasalCrom Nasal Sprayဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
NasalCrom Nasal Sprayကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Nalsalcrom Nasal Spray အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အကယ်၍ သင့်မှာအောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေတစ်ခုခုရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆေးအသုံးမပြုခင် သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုပြောပြတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန် – အကယ်၍သင်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေတဲ့ မိခင်တစ်ဦး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဆေးကိုမဆို ဆရာဝန်မညွှန်ကြားဘဲအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
အခြားဆေးဝါးများ သောက်သုံးနေချိန် – တိုင်းရင်းဆေး၊ အားဖြည့်ဆေးများ အပါအဝင် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးအားလုံးကိုသင့်ဆရာဝန်သိအောင် ပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
NasalCrom Nasal Sprayသို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများတွင်ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Nalsalcrom Nasal Spray ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးအသုံးမပြုမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။
Nalsalcrom Nasal Spray ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
NasalCrom Nasal Spray ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလက္ခဏာတွေကတော့
နှာခေါင်းထဲဆိုးဆိုးရွားရွားပူလောင်ခြင်း၊ စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်ခြင်း၊ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ခြင်း
နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း၊ ထိပ်ကပ်နာဖြစ်ခြင်း၊ နှာခေါင်းထဲအနာဖြစ်ခြင်း
အဖျားတက်ခြင်း၊ နှာခေါင်းထဲမှ အစိမ်းရောင် သို့မဟုတ် အဝါရောင်နှပ်များ ကျခြင်း
ဆေးအသုံးပြုပြီးချိန်တွင် နှာခေါင်းတွင်းအနည်းငယ် ပူလောင်ခြင်း၊ စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်ခြင်း
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Nalsalcrom Nasal Spray နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
NasalCrom Nasal Sprayဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Nalsalcrom Nasal Spray နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
NasalCrom Nasal Sprayက အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Nalsalcrom Nasal Spray နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
NasalCrom Nasal Sprayဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Nalsalcrom Nasal Spray ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဓါတ်မတည့်တုန့်ပြန်မှုလက္ခဏာများသက်သာစေဖို့ နှာခေါင်းတစ်ဖက်စီကိုတစ်ကြိမ်လျှင် ၁ချက်နှုန်းဖြင့် တစ်ကြိမ်နဲ့တစ်ကြိမ်ကြားအချိန်ပုံမှန်ခြားပြီးတစ်နေ့ ၃ကြိမ်မှ ၆ကြိမ်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Nalsalcrom Nasal Spray ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၆နှစ်အထက် ကလေးငယ်တွေမှာဖြစ်တဲ့ ဓါတ်မတည့်တုန့်ပြန်မှုလက္ခဏာများသက်သာစေဖို့ နှာခေါင်းတစ်ဖက်စီကိုတစ်ကြိမ်လျှင် ၁ချက်နှုန်းဖြင့် တစ်ကြိမ်နဲ့တစ်ကြိမ်ကြားအချိန်ပုံမှန်ခြားပြီးတစ်နေ့ ၃ကြိမ်မှ ၆ကြိမ်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Nalsalcrom Nasal Spray ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
NasalCrom Nasal Sprayကို ၁မီလီလီတာမှာ ဆေး၅.၂ဂရမ် ပါဝင်တဲ့ နှာခေါင်းထဲဖြန်းရတဲ့ ဆေးရည်ပုံစံနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာအရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ
NasalCrom Nasal Spray ကိုအသုံးပြုဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးအသုံးပြုပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသုံးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
NasalCrom (Nasal spray). http://www.nasalcrom.com/. Accessed January 5, 2016.
NasalCrom (Nasal spray). https://www.drugs.com/mtm/nasalcrom-nasal.html. Accessed January 5, 2016.
NasalCrom (Nasal spray). http://www.webmd.com/drugs/2/drug-14037/nasalcrom-nasal/details. Accessed January 5, 2016.